बार्सिलोनाको ११ मा को को फर्किए ?? आजको सम्भावित ११ मा यी खेलाडी फर्किए - Experience Best News from Nepal
१यस्ता राशीहरुलाई आज धन प्राप्ति हुनेछ र लगानी प्रतिफल कस्तोलाई होला ? पुरा हेर्नुस्
२विवाहलगत्तै गर्न नहुने चार काम
३बिहे अघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
४आज मंगलबारको राशिफलले तपाईंलाई के भन्छ ? जान्नुहोस्
५सानो लिंगलाई कसरी ठूलो बनाउन सकिन्छ !! अपनाउनुहोस् यी ४ सरल र सहज तरिका
६कोन्टे पछि युभेन्ट्सको सम्भावना बढाउदै चेल्सीका मौरिजियो सारी
७रियलले सुरु गर्यो ‘अपरेसन पोग्बा’, पोग्बाको सपना जिदानसंग काम गर्ने !!
८पहिलो पटक यौन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ ? यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
बार्सिलोनाको ११ मा को को फर्किए ?? आजको सम्भावित ११ मा यी खेलाडी फर्किए
प्रकाशित मिति : आइतवार, चैत्र ३, २०७५
ला लिगा फुटबल अन्तर्गत आज बार्सिलोनाले रियल बेटिसको सामना गर्दै छ, नेपाली समय अनुसार १:३० बजे बिहान हुने उक्त खेलमा सम्भावित ११ मा पर्न सक्ने सुचि को सम्भावना बाहिरिएको छ। आजको खेलमा डिफेन्डर उमटिटी देखि मिडफिल्डमा भिडाल हुदै अट्याकमा डेम्बेलेको स्थानमा पुन कौटिन्हो फर्किने सम्भावना देखिएको छ।
भल्भार्देले लेंग्लेटलाई समुल उमटिटीको स्थानमा खेलाउदै आइरहेका थिए। उमटिटी घाइते समेत रहेको हुदा पिकेसंगै लेंग्लेटलाई पूर्ण स्थान दिइएको थियो। आजको सम्भावित ११मा उटिटी फर्किने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
त्यस्तै मिडफिल्डमा ताजा खेलाडीलाई स्थान दिन कै निम्ति भिडाललाई ल्याइने भएको छ। बार्सिलोनाको खेल पदर्शनमा सफाई भएकै कारण भिडाललाई स्थान दिइएको हो। साथै एलिनाको सम्भावना समेत उतिकै छ। आजको खेलमा पुरानै ११ बाट राकीटिक र बुस्केट्स मिडफिल्डमा उत्रिने छन्।
भल्भार्देले कौटिन्होको खेलमा परिवर्तन पाएको महसुस गरेका छन् भने च्याम्पियन लिगमा पदर्शन फिरेकोमा पुन डेम्बेलेको स्थानमा कौटिन्होलाई अट्याकमा ल्याइदै छ। डेम्बेले चोट अवस्था मै छन् तर मालकमको भन्दा ११ भित्रको सम्भावनामा कौटिन्हो दाबेदार देखिन्छन।
आजको बार्सिलोनाको सम्भावित ११:
टर स्टेजेन, सेमेड़ो, पिके, उमटिटी, अलावा,राकीटिक, बुस्केट्स, भिडाल, मेस्सी, स्वरेज, कौटिन्हो
कौटिन्होको गोल उत्सव माथि रिभाल्डोको आपत्ति !!!
फुटबल इतिहासमा एउटै क्लबका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने ५ खेलाडीहरु !
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ६४, लिओनेल मेस्सी ४२
के कति छ मेस्सी , रोनाल्डो पेनाल्टी रेकर्ड !! सार्बजनिक भयो तथ्यांक
टाइटल रेसमा रहेका ३ ठुला लिगका ३ ठुला टोलीको महाभिडन्त आज !! जानुहोस्
कौटिन्हो : म बार्सिलोनामा नै बस्न चाहन्छु !!!
BarcelonaLa LigaLionel MessiPhilippe Coutinho
रियलले सुरु गर्यो ‘अपरेसन पोग्बा’, पोग्बाको सपना जिदानसंग काम गर्ने !!
भयानक र रोमान्चक बन्दै सिरी ए अन्तिम ४, जुबेको कठिन ड्र, इन्टर माथि नापोलीको फराकिलो जित
एइबार विरुद्ध मेस्सीको २ गोल पश्चात रोबर्टोले दिए यस्तो प्रतिक्रिया !!
इतिहास रच्दै, भर्जिल भ्यान डाइक बने प्रिमिएर लिग प्लेयर अफ द सिजन !!
हालै प्रिमिएर लिग सकिएको छ, भने लिभरपूल स्टार